दुनियाँको आँशु आउँने घटना : प्रेमीको काख तताउन छोरीलाई पानीको ट्याङ्कीमा हालेर ढकन लगाइदिइ ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/दुनियाँको आँशु आउँने घटना : प्रेमीको काख तताउन छोरीलाई पानीको ट्याङ्कीमा हालेर ढकन लगाइदिइ !
काठमाडौ । आमा शब्द आफैंमा एक सम्मानको शब्द हो । यो बीचमा कहिलेकाँही यस्ता घटनाहरु हुन्छन् जसले गर्दा हामी यो शब्दमाथि नै घृणा गर्न बाध्य हुन्छौँ । यस्तै एक घटना बाहिर आएको छ । भारत, मध्यप्रदेश राज्यको भोपालको शीतला माता मन्दिरको नजिक पानीमा बालिकाको मृत शरीर भेटिएको थियो । यो घटनामा नयाँ खुलासा भएको छ । उनको ज्या’न लिने अरु कोही नभएर उनकै आमा हुन् । भोपालमा आमाले आफ्नै छोरीको ज्या’न लिएको यो दोस्रो घटना हो । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
गोताखोर विभागले बिहीबार राति राजा भोजको मूर्ति अघि महिला रेलिङ्गको छेउमा उभिन् र फोनमा कुरा गरिरहेकी थिइन । गोताखोर फैज उल्लाह महिलालाई अनहनी हेरिरहेको र उनीसँग कुरा गरिरहेको भिडियो बनाए । उनीले आफ्नो श्रीमानसँग तनाव उत्पन्न भएको छ भनेकी थिइन् । उनको श्रीमानको नाम शिवम हो । ऊ रायसेनबाट उनी भएको ठाउँमा आउँदैछ भनेर प्रहरीलाई बयान दिएकी थिइन् । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
भोपालमा आमाले आफ्नी छोरीको ज्या’न लिएको यो लगातार दोस्रो घटना हो । यस अघि २१ वर्षीया सरिताले छोराको खोजीमा खजुरी थाना क्षेत्रको पानीमा डुबाएर आफ्नी छोरीको ज्या’न लिएकी थिइन् । सरिताले आफ्नी छोरीलाई पानीको ट्याङकीमा राखेपछि माथिल्लो भागमा एउटा ढक्कन पनि राखेर ज्या’न लिएकी थिइन् । यो सब उनले किन गरेकी हुन् भन्ने अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको छ । ति दुै जनालाई प्रहरीले तिव्र रुपमा खोजिरहेको छ । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **